Tafura yechikoro: ndeipi yekusarudza ulator Emulator.online ▷ 🥇
Makumi makumi mashoma apfuura kudzidza izvo zvaive zvakakwana kuti mabhuku ese echikoro aratidzwe kumudzidzisi; Nhasi, kune rimwe divi, vadiki uye vadiki kwazvo vanopinda chikoro uye chikoro chepamusoro vanofanirwa kunge vaine rimwe chete piritsi, risingabatsire pakutora manotsi, nekutsvagisa paWebhu nekudzamisa zvimwe zvekufunda pamwechete. nemudzidzisi asiwo kuronga nekukurumidza kudzidza chinhambwe kana kudzidza newaunoshanda navo kuburikidza nevideoconference (inova inotonyanya kukosha kana paine kurambidzwa nekukanganisa kunoitwa nevakuru vehutano.
Nekuti piritsi rakakosha munzira yemudzidzi yemazuva ano, mune ino gwara tinokuratidza mahwendefa akanakisa echikoro kuti iwe unogona kutenga pamhepo, saka unogona chete kusarudza mhando dzinokurumidza, dzinogwinyisa, uye dzinoenderana nemaapps ayo anobatsira pakudzidza. Kana tichida tenga hwendefa idzva rechikoro Muchitoro chemuviri kana munzvimbo yekutengesa zvinogara zvichikurudzirwa kutora kutanga tarisa pane akataurwa ehunyanzvi hunhu, kudzivirira kutenga anononoka, asingakurumidzi mapiritsi ekusahadzika kuenderana.
VERENGA ZVIMWE: Yakanakisa Android Hwendefa: Samsung, Huawei kana Lenovo?
Iyo yakanakisa piritsi yechikoro
Kune mahwendefa mazhinji akakodzera chikoro, asi mashoma chete anokodzera kutarisirwa sekudzidzisa. Vamwe vadzidzisi uye mapurofesa vanozomanikidza chaiwo mamodheru ekirasi yese, saka gara uchibvunza usati waita kutenga kungave kusiri iko.
Usati watenga chero piritsi rekuzvipira kuchikoro, tinokukurudzira kuti utarise hunhu hunotevera:
Processor: Kuti titange ese mafomu echikoro, isu tinofanirwa kutarisa kune mamodheru ane 2 GHz quad-core processor kana zvimwe zvakanyanyisa kugadzirisa (vhezheni neOcta-core CPUs).
RAM: kumhanyisa iyo sisitimu yekushandisa uye mashandisiro edzidzo, 2GB ye RAM inokwana, asi kugona kuvhura kunyangwe 2 kana 3 mafomu anorema pasina matambudziko zvinokurudzirwa kutarisa mamodheru ane 4GB ye RAM.
Internal memory- Mahwendefa echikoro anokurumidza kuzadza nemanotsi akadhirowewa, mabrochure, uye mafaera ePDF, saka zvakanakira kuve neinenge 32GB yekurangarira ipapo ipapo, kunyange zvirinani kana ichigona kuwedzerwa (zvirinani pane Android mamodheru). Kuti tidzivise matambudziko epakati, tinokurudzira zvikuru sanganisa gore rebasa kupi kwekuchengetedza mafaera makurusa.
Screen: Iyo skrini inofanirwa kuve inokwana masendimita masere uye inofanirwa kutsigira HD resolution (inopfuura 8 mitsara yakatwasuka). Mazhinji mamodheru achapa skrini neIPS tekinoroji, asi isu tinogona zvakare kuwana Retina (kuApple).
Kubatana- Kugona kubatanidza kune chero netiweki yeWi-Fi iwe unoda mbiri-bhendi isina waya module, kuti iwe ugonewo kubatsirwa kubva ku kutsanya 5 GHz kubatana. Iko kuvapo kweBluetooth LE kwakakoshawo, kuti ukwanise kubatanidza chero modhi yeasina waya mahedhifoni. Models ine SIM uye nharembozha rutsigiro (LTE kana gare gare) inodhura uye yedzidzo ibasa risingafadzi.
Makamera: Pamusangano wevhidhiyo zvakakosha kuti paine kamera yekumberi, kuti ugone kushandisa Skype kana Zoom pasina matambudziko. Kuvapo kwekamera yekumashure isarudzo inonakidza, nekuti kuwedzera kune iwo mapikicha ayo anotendera tarisa mapepa mapepa kuti uchinje iwo kudigital.
AutonomyMahwendefa ane makuru mabhatiri kupfuura mafoni uye anotendera, pasi peyakajairika mamiriro ekushandisa, kusvika zvakachengeteka maawa matanhatu neanomwe ekushandisa.
Inoshanda system: anenge ese mahwendefa atichakuratidza iwe Android senzira yekushandisa asi hatifanire kurerutsa zvakawandisa iPads ine iPadOS, inokurumidza, inokurumidza uye kazhinji inodikanwa sisitimu (vamwe vadzidzisi vanozonyatsokumbira iPads semidziyo yekudzidzisa).
Models yekutengesa kusarudza kubva
Mushure mekuona pamwe chete mamwe ehunhu hunofanira kuve netafura yakanaka yechikoro, ngatimboonai mamodheru aunogona kutenga, kutanga neakachipa kusvika kumusoro kwerudzi. Iyo yekutanga modhi yatinokukurudzira kuti utore sehwendefa rechikoro ndiyo nyowani Moto HD 8, inowanikwa paAmazon isingasviki € 150 (ine anoshanda anokosha zvipo)
Mune iri bheteri rakachipa tinowana 8-inch IPS HD skrini, quad-core processor, 2GB ye RAM, 64GB yekuwedzera mukati mememori, USB-C yekuchaja, pamberi pekamera, kumashure kamera, kuzvitonga kusvika maawa gumi nemaviri uye Muridzi-based operating system pane Android (isina Play Store asi neAmazon App Store).
Kana isu tichida iyo Play Store pahwendefa yechikoro uye nekuita kuti zvive nyore kuwana mafomu ekufunda, tinogona kutarisa pahwendefa Samsung Galaxy Tab A7, inowanikwa paAmazon isingasviki € 250.
Mune iyo Samsung piritsi tinowana iyo 10,4-inch skrini ine 2000 x 1200 Pixel resolution, octa-core processor, 3 GB ye RAM, 32 GB yekuwedzera yekumusoro ndangariro, mbiri-bhendi Wi-Fi, otomatiki hotspot, kumberi kamera, kamera kumashure, 7040 mAh bhatiri uye Android 10 inoshanda sisitimu.
Imwe piritsi inokodzera kushandiswa kwechikoro ndiyo Lenovo Tab M10 HD, inowanikwa paAmazon isingasviki € 200.
Mune ino piritsi tinokwanisa kuwana 10,3-inch Yakazara HD skrini, MediaTek processor, 4GB ye RAM, 64GB yemukati memory, WiFi + Bluetooth 5.0, dhoketi ine yakazvipira masipika ekuteerera, akabatanidzwa Alexa izwi mubatsiri uye 10-awa bhatiri. duration.
Kana, kune rumwe rutivi, tichida piritsi rinotengeswa zvakanyanya pamusika chero zvodii (kana vadzidzisi vamanikidze chigadzirwa cheApple patiri), tinogona kufunga nezveApple iPad, inowanikwa paAmazon isingasviki € 400.
Kufanana nezvose zvigadzirwa zveApple, inotarisirwa pasi kusvika kune diki diki uye ine 10,2-inch Retina kuratidza, A12 processor ine Neural Injini, rutsigiro rweApple Penzura uye Smart Khibhodi, 8 MP kumashure kamera, Wi-Fi ye Dual band, Bluetooth 5.0 LE, 1.2MP FaceTime HD vhidhiyo kamera, stereo speaker uye IPOS inoshanda sisitimu.
Kana isu tisingagutsikane neyakareruka iPad uye tichida inotakurika mini PC kuti iite zvese, iyo chete modhi yekutarisisa pairi ndiyoApple iPad Pro, inowanikwa paAmazon isingasviki € 900.
Piritsi iri rine 11 "kumucheto-kumucheto Liquid Retina kuratidza neProMotion tekinoroji, A12Z Bionic processor ine Neural Injini, 12MP yakafara-kona kumashure kamera, 10MP Ultra-wide angle, LiDAR scanner, 7MP TrueDepth kumberi kamera, Face ID , ina-mutauri odhiyo, nyowani 802.11ax Wi-Fi 6 inoshanda sisitimu uye iPadOS.
Mahwendefa atataura pamusoro apa akakwana chero kosi yekudzidza, kubva kupuraimari kusvika kukoreji. Kunyangwe mhando dzakachipa dzinoita chikamu chavo chaizvo, kunyangwe zvinogara zvichikurudzirwa kutarisa paPad (kana mamiriro ehupfumi achiibvumira) nekureruka kwayo, kumhanyisa kwekuitwa kwesarudzo uye kuenderana nematurusi edzidzo.
Kana iwe uchitsvaga mahwendefa ane akavakirwa-mukati keyboard, isu tinokurudzira kuti iwe uverenge vatungamiriri vedu Yakanakisa 2-mu-1 Hwendefa-PC ine inobvisa khibhodi mi Zvakanakisa Windows 10 Laptops Inoshandurwa kune Hwendefa. Kana, pane kudaro, isu tikasaramba simba uye nyaradzo yekunyora iyo yetsika kabhuku kabhuku, tinogona kuramba tichiverenga mugwara Iwo akanyanya kunyora mabhuku evadzidzi.